Pyae Phyo (MMiTD): ♪ “ Windows 10S ” ဆိုတာ ♫
♪ “ Windows 10S ” ဆိုတာ ♫
Microsoft ဟာ Windows 10 S ကို ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ ယခင်ကတည်းက ကောလာဟလထွက်နေခဲ့တဲ့ Windows cloud OS ဖြစ်ကာ စာသင်ခန်းတွေအတွက် အဓိကထားပါတယ်။ ဒီ Cloud OS ဟာ Chrome OS နဲ့ Chrome book တွေကို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ထွက်လာမယ်လို့ သတင်းထွက်နေတာ လအတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒါကြောင့် Windows 10 S ကို မေ2ရက်က တရားဝင်ပြသသွားခဲ့ပြီး Windows 10 Pro သုံးနေတဲ့ ကျောင်းအားလုံးမှာ အခမဲ့ upgrade ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Windows 10 S ဟာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး လာမယ့်နှစ်စာသင်နှစ်မှာ 189 $ က စတင်တဲ့ဈေးနဲ့ laptop တွေမှာ ပါဝင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP Samsung, Toshiba တို့နဲ့ ပူးပေါင်းထားပြီး Windows 10 S ကို ဘယ် laptop မှာမဆို သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Windows 10 S နဲ့ Windows 10 ရဲ့ အဓိကခြားနားချက်က Windows 10 S မှာ Windows Store က app တွေကိုပဲ install လုပ်နိုင်တာကြောင့် လုံခြုံရေးကို အထူးစိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ App တွေဟာ soft container ထဲကသာ run မှာဖြစ်တာကြောင့် PC ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်မှုရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Windows 10 S Laptop တွေဟာ စ၀ယ်တဲ့နေ့က စွမ်းဆောင်ရည်အတိုင်း ဆက်တိုက်စွမ်းဆောင်ပေးသွားနိုင်မယ်လို့ Microsoft က ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတွေအနေနဲ့လိုအပ်ပါက အခြား apps များ install လုပ်ရန် Pro mode ကို သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် ကလေးတွေအတွက်တော့ ဒီအခွင့်အရေးကို ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ .exe file တစ်ခုကို install လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတာနဲ့ သတိပေးမှာဖြစ်ပြီး အခြားဆင်တူတဲ့ Windows Store app ကို အကြံပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
Windows 10 S ဟာ Windows Store ထဲက web browser အားလုံးကို သုံးနိုင်မယ့် Microsoft Edge ကို အညွှန်းတင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသားတွေအတွက် အဓိကရည်ရွယ်တဲ့ features တွေ ပါဝင်ကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Windows 10 S သုံး device တွေဟာ ပုံမှန် Windows 10 device တွေလိုပဲ အပိုပစ္စည်းတွေကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Ohbot Arduino robot ဟာ ကလေးတွေကို VR headset နဲ့ coding သင်ကြားဖို့ ကူညီနိုင်တာမျိုးပါ။ Windows 10 S laptop တွေဟာ ဖွင့်ရာမှာအထူးမြန်ဆန်မှာဖြစ်ပြီး 15 စက္ကန့်လောက်ပဲကြာတာကြောင့် ကျောင်းသားတွေအတွက် အချိန်ကုန်ခံစရာမလိုပါဘူး။ Windows 10 S laptop တွေရဲ့ setting ကို ဗဟိုကနေထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး အပြောင်းအလဲလုပ်ရာမှာလွယ်ကူစေပါတယ်။ ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ Pre-configured ပုံစံကိုကွန် ပျူတာတစ်ခုစီမှာ USB stick နဲ့ စက္ကန့် 30 အတွင်း ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ Office 365 Personal ဟာလည်း Windows Store ကို ရောက်ရှိလာတော့မယ်လို့ Microsoft က ကြေညာခဲ့ပြီး Office 365 for Education ကိုတော့ အခမဲ့ပေးထားပါတယ်။ Microsoft Education Edition ကို 1 နှစ် အခမဲ့ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Micrpsoft ရဲ့အဆိုအရ Windows 10 မှာပါဝင်တဲ့ S ဟာ
(၃) ပိုမိုသာလွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရည်ညွှန်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Windows 10 S မှာစွမ်းဆောင်ရည်ကောလုံခြုံရေးပါ တိုးတက်လာမယ်လို့ Microsoft က ဆိုပါတယ်။ Windows Store က app တွေပဲရတဲ့အတွက် ဒါဟာ သိပ်တော့မထူးဆန်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် malware တွေနဲ့ မလိုအပ်တဲ့ app helper တွေကို တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Windows 10 S ရဲ့ log in time ကိုလည်း ဒါကြောင့်ပဲ လျော့ချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ Microsoft Edge ကို သုံးခဲ့တာက ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုပါ တာရှည်ခံဖို့ အထောက်အကူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Microsoft ဟာ Windows 10 S device တွေအတွက် ဘက်ထရီသက်တမ်းတာရှည်ခံမှုကိုလည်း အဓိကထားခဲ့ပြီး laptop ကို တစ်နေကုန်သုံးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
Defult Browser & Search Settings
Windows Store ထဲက အခြား browser တွေကို ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပေမယ့် Windows 10 S သုံးသူတွေဟာ defult browser ကိုတော့ ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ Windows 10 S မှာ link တစ်ခုကို နှိပ် လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Microsoft ရဲ့ Edge browser ပဲ ပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Google ရဲ့ Chrome OS နဲ့ ဆင်တူပြီး သုံးစွဲသူတွေကို Chrome browser ကိုသာ သုံးခွင့်ပေးပါတယ်။ Microsoft ဟာ Microsoft Edge ကို Bing Search engine နဲ့သာ Windows 10 S မှာသုံးနိုင်ဖို့ lock down ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် Google Search ကို အလွယ်တကူပြောင်းလဲသုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲ Google.com ကနေ ၀င်ရောက်သုံးစွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Look and Works Just Like Windows 10
Windows 10 S ဟာ Windows 10 Lite version လုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ သိထားဖို့တော့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် Windows 10 နဲ့ 10 S ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေဟာ အားလုံးနီးပါး တူညီပါတယ်။ Windows 10 S laptop တွေကို နွေရာသီမှာ စတင်မြင်ကြရမှာဖြစ်ပြီး ကျောင်းတွေမှာ Windows 10 Pro ကနေ Windows 10 S ကို အခမဲ့ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။
Windows Store မှာမရှိတဲ့ app တွေကို သုံးဖို့လိုလာခဲ့ရင် Windows 10 Sအတွက် အပြောင်းအလဲလုပ်ခွင့်ကို Microsoft က ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ Windows 10 S ကနေ Windows 10 Pro ဆီကို 49 $ နဲ့တင် အဆင့်မြှင့် တင်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဲ့ device တွေအတွက်တော့ ဒါဟာမဆိုးလှပေမယ့် premium device တွေအတွက်တော့ ဒါဟာအပိုသက်သက်ကုန်ကျမှုပါ။ Windows 10 S ပါဝင်လာမယ့် device တွေ အများကြီးမတွေ့ရသေးပေမယ့် Microsoft Surface Laptop ရှိနေပြီး Windows 10 Pro အဆင့်မြှင့်တင်ခွင့်ကို ဒီနှစ်ကုန်ထိ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
Isn't this Windows RT 2.0 ?
Windows 10 S ကို Windows RT စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအဖြစ် နာမည်တပ်ချင်သူတွေရှိပေမယ့် Windows 10 S မှာကွဲပြားမှုတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ Microsoft ဟာ Windows 10 S ကို ပညာရေးအတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့ပြီး tablet အတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ Windows Store ထဲက desktop app အားလုံးကိုလည်း သုံး နိုင်လာပါတယ်။ လိုအပ်ခဲ့ရင်လည်း Windows 10 Pro ကို အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး Windows RT သုံးသူတွေလို Windows နဲ့တူသာတူပြီး ဘာမှလုပ်မရတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဈေးသက်သာတဲ့ laptop ကိုဝယ်ပြီး desktop app တွေရှာမရတာမျိုးဖြစ်ကာ သုံးစွဲသူအချို့ကိုတော့ နားလည်မှုလွဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Microsoft ဟာ ဒီတစ်ခါမှာသုံးစွဲသူတွေအတွက် ရှုပ်ထွေးမှုသိပ်မဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါ တယ်။
Why Microsoft Created Windows 10 S ?
Microsoft ဟာ Windows 10 S ကို ပညာရေးအတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် ဒါဟာ သေချာတွက်ဆထားတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Microsoft ဟာ Windows 10 ရဲ့ Universal Windows Platform ကို လုပ်ဆောင်ရာမှာ အောင်မြင်မှုများများမရဘဲ Windows Phone တွေဟာ ဈေးကွက်ထဲမှာ 1% တောင်မရှိတာ ကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် Universal Windows Platform ကို developer တွေက စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘဲ Windows Store အောင်မြင်ဖို့အတွက် desktop app တွေကို ဒီ့ထက်ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ Developer တွေရဲ့ app တွေကို Windows Store ဆီ ခွင့်ပြုပေးခြင်းဟာ Windows ရဲ့ ecosystem ကို တိုး တက်စေသလို app ရောင်းချမှုကရတဲ့ ဝေစုရာခိုင်နှုန်းကြောင့် နှစ်စဉ်ဝင်ငွေမှာပါ တိုးတက်လာဖို့ရှိပါတယ်။ Google လို UWP မှာ မပါဝင်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ app တွေတောင် Windows Store မှာ ပါဝင်လာနိုင်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် Windows 10 S ဟာ Microsoft ရဲ့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပိုမိုလုံခြုံတဲ့ Windows အတွေ့ အကြုံကိုပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ Desktop app တွေ Windows မှာ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာကို Windows 10 S နဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Microsoft ဟာ Surface ကွန်ပျူတာအသစ်တစ်ခုကို ပြသခဲ့ပြီး touchscreen tablet မဟုတ်ဘဲ Surface laptop ဟာနာမည်အတိုင်း laptop စစ်စစ်ဖြစ်တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ Microsoft ရဲ့ Windows 10 S ကိုသုံးတဲ့ ပထမဆုံး laptop ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Surface laptop ဟာ ယခင် Surface device တွေနဲ့ Software အရကော hardware အရပါ များစွာကွာခြားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Surface Laptop ကို 999 $ ဈေးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Surface Pro တွေဟာ အင်မတန်ထင်ရှားတဲ့ hybrid2in 1 PC တွေ ဖြစ်ကြပြီး tablet နဲ့ laptop ကြားက လူကြိုက်များတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ Surface Pro ဟာ tablet ဘက် ပို အားသန်ခဲ့ပြီး Surface Book ကတော့ laptop ဘက်ကို ပိုအားသန်ခဲ့ပါတယ်။ Surface laptop ကတော့ laptop စစ်စစ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး 13.5" laptop 14.5 mm သာရှိကာ ပါးလွှာခဲ့ပြီး 2.76 ပေါင်သာလေးလို့ 13" MacBook Pro ထက် ပေါ့ပါးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အထဲမှာပါဝင်တဲ့ hardware တွေကလည်း premium အဆင့် laptop တစ်ခုမှာ ပါဝင်ဖို့ မျှော်မှန်းထားနိုင်တဲ့ hardware တွေပါပဲ။ Surface laptop မှာ Intel Core i5 CPU, RAM4GB နဲ့ SSD store 128 GB တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ Core i7 , 8 GB RAM နဲ့ 256 GB storage တို့ ပါဝင်တဲ့ Surface laptop ကိုတော့ 1599 $ ဈေး သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ 3:2 aspect ratio screen ပါဝင်ပြီး touch screen ဖြစ်ကာ laptop တွေထဲမှာ အပါး လွှာဆုံး touch module ကို သုံးထားတဲ့အပြင် Microsoft ရဲ့ Surface Pen သုံးစွဲမှုကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ screen ကို 360 ဒီဂရီလှည့်လို့မရသလို ဖြုတ်ယူသွားပြီး tablet လိုလဲ သုံးလို့မရနိုင်ပါဘူး။ Backlit keyboard ပါဝင်ကာ 1.5 mm travel ရှိပါတယ်။ အရောင်4မျိုးရွေးချယ်နိုင်ပြီး platinum, gold, burgundy နဲ့ cobalt blue တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Laptop စပီကာတွေဟာ အပေါ်ဘက်ကိုလှည့်ထားပါတယ်။ Surface Dial နဲ့ တွဲဖက်သုံးနိုင်ပေမယ့် off-screen interaction သီးသန့်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ USB 3.0 port နဲ့ Mini Display Port တို့ ပါဝင်ပေမယ့် USB Type-C ပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါအစား Surface Connect port ကို ထည့်သွင်းပေးထားကာ $ 200 တန် Surface Dock နဲ့ တွဲဖက်သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Microsoft ဟာ 14.5 နာရီ ဘက်ထရီ သက်တမ်းထိ ဗီဒီယိုကြည့်နိုင်မယ်လို့ အာမခံပေးထားပါတယ်။
Premium Price For Limited OS
Windows 10 ဟာ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ လုံခြုံတဲ့ Laptop ကြိုက်သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့ပြီး အနီးစပ်ဆုံးနှိုင်းယှဉ်ရရင် Google Chromebook Pixel နဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ဆိုချင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် ကြည့်ရင် Surface Laptop Windows 10 နဲ့ ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်ပေမယ့် လိုအပ်ခဲ့ရင် အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်မယ် လို့ Microsoft က ဆိုပါတယ်။ 2017 နှစ်ကုန်ထိ အခမဲ့ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ 49 $ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Pro ဟာ သုံးစွဲပုံအတူတူပဲဖြစ်ပြီး နှစ်သက်ရာ Software ကို download ရယူနိုင်တာ တစ်ခုပဲ ထူးခြားပါလိမ့်မယ်။ HP, Dell-Acer အပြင် အခြားကွန်ပျူတာထုတ်လုပ်သူများစွာက Windows 10 S system တွေ ထုတ်လုပ်သွားဖို့ရှိနေပြီး Touchscreen (သို့) hybrid ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ဒေါ်လာ 200-300 အောက်ဈေးတွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ Surface Laptop ကို ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး US မှာ ဇွန် 15 ရက်မှ စတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီး UK နဲ့ သြစတြေးလျကို သြဂုတ်လ 15 ရက်မှ ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။
Screen : 13.5" PixelSenseTM
Resolution : 2256 x 1504 (201 PPI)
Aspect ratio : 3:23.4 million pixels
Processor 7th Generation Intel ® CoreTM i5 or i7
TPM chipEnterprise-grade protection with
Windows 10 S2 Prefer to run non-Store app?
Easily switch to Windows 10 Pro for free until
Options: 128GB, 256GB , or 512GB
Surface LaptopPower SupplyQuick
USB 3.0 Headset jack Mini
ConnectTM Compatible with Surface
Dial off-screen interaction*
Windows Hello face sign-in camera 720 p HD
camera (front-facing) Stereo microphones
Omnisonic speakers with Dolby® AudioTM
Premium 3.5 mm headphone jack
Wi-Fi : 802.11ac Wi-Fi wireless
Networking : IEEE 802.11 a/b/g/n compatible
Colors : Burgundy, Platinum, Cobalt Blue, Graphite
အမျိုးအစား: Windows 10 ဆိုင်ရာများ